သူက YALE ကို NATIVE AMERICAN ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဘာကြောင့်သူစီစဉ်ထားတာလဲလို့ MILO YIANNOPOULOS ကိုမေးခဲ့တယ် - နှုန်းထားများ
သူဟာယေးလ်ကိုဇာတိအမေရိကန်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဘာကြောင့်စီစဉ်ထားတာလဲလို့ Milo Yiannopoulos ကိုမေးခဲ့တယ်
Milo Yiannopoulos သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အလွန့်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူကြမ်းကြီးသောလူကြမ်းအဖြစ်သူမကြာသေးမီကသူသည်သူ၏ Dangerous Fagot Tour ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Yale သို့လာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ဂေးရှေးရိုးစွဲအိုင်ကွန်သည် #GamerGate တွင် Kernel ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူသည်နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင် Breitbart ၏ရှေးရိုးစွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အတွက်နည်းပညာအယ်ဒီတာဖြစ်သည်။ သူသည်ယေးလ်တွင်အောက်တိုဘာလအထိစကားပြောဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသူသည်အွန်လိုင်းမှအငြင်းပွားမှုများကိုနှိုးဆွပေးပြီးဖြစ်ရာသူ၏ဟောပြောချက်ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ အသင့်ပြင်ထားပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမွေအနှစ်များ၊ Jack Montague ကိစ္စ၊ အစ္စလာမ်နှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲများသည်သူ၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်သည်။
မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး။ ငါနောက်နေတာမဟုတ်ဘူး ဒါကငါလုပ်မယ့်အတိအကျအရာပါပဲ။
မင်းစိတ်ပျက်သွားတယ်။ ဒါဟာဟာသမဟုတ်ဘူး။ ငါလုံးဝကလုပ်နေတာပေါ့။
ယခုကဲ့သို့အ ariana Grande ကြည့်သောအရာကိုမ
အကယ်၍ ပြီးခဲ့သည့်ဟယ်လိုဝိန်းမှဗီဒီယိုသည်သွားနိူင်သည့်အရာဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ quad အတွင်းရှိစိတ်ဓာတ်များကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောဆင်းရဲသားများသတိမထားမိသောပါမောက္ခ - ကျွန်ုပ်သည် Native American ဝတ်စုံကိုအပြည့်အ ၀ ပြသခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ခေါင်းများကိုပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။ ငါဆိုလိုတာကသူတို့ဟာပျော့ပျောင်းတာ၊ လိမ်တာ၊ တောက်ပတာ၊ အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသူတို့စိတ်မချရဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားသူတစ်ယောက်၊ နေရောင်အောက်မှာတခြားနာမည်များစွာကိုခေါ်လိမ့်မယ်။ ဆက်လုပ်။ ထိုအခါလိုချင်သူများသည် လာရောက်၍ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမည်မျှသင့်လျော်သည်ကိုစုစုပေါင်းမြင်း shit အကြောင်းကြားကြလိမ့်မည်။ လက်ဝဲဘက်ကသင့်ကိုနာမည်တစ်ခုခေါ်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းပဲ၊ ပီကာဆို၊ မိုဇတ်၊ ဗန်ဂိုး၊ လီဝိန်းစတဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင့်လျော်မှုလို့ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်။ ကြိုက်တယ် သူတို့သည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းပူပန်ကြသော်လည်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအမှန်တကယ်မဖတ်ခဲ့ကြပါ။ သူတို့ဟာအခြားသူတစ် ဦး ဦး အတွက်ကာကွယ်ပေးနေသည့်ယဉ်ကျေးမှုများအကြောင်းဘာမှမသိရသောကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်သင်ပေးမည်။ ထိုအခါငါအလွရှာဖွေနေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်။ အခြားကောလိပ်များထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ဖြေပါ။ မည်သူကအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်မိသနည်း။ ကြွေးကြော်အော်ပြောရန်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှအနှောင့်အယှက်ပေးမည့်အစား၊ သင်တစ် ဦး gasket မှုတ်, ရှုပ်ထွေးအောင်ပြီးတော့သင်အစောင့်အကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂရုမစိုက်ဘူး? အငြင်းပွားမှုနှင့်အတူလာကြ။ အမှန်တကယ်မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့လာပါ။ ဥာဏ်ပညာကိုစိန်ခေါ်ပါ။ သငျသညျယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင့်လျော်သောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းယုံကြည်လျှင်, လူမျိုးရေးခွဲခြားမယ့်, လူများကမကျင့်, လာ။ အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြမသင့်ကြောင်း။
ကောင်းပြီ၊ ဘုရားသခင့ဘို့အလိုငှါ, ယေးလ်ပါပဲ။ သူတို့မကျင့်လျှင်ငါအမေရိကန်ပညာရေးစနစ်၏အနာဂတ်အဘို့အဘယ်သူမျှမယုံကြည်ခြင်းရှိသည်။ သူတို့ကလာပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးချင်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကအငြင်းပွားမှုကိုတင်ပြချင်တာမဟုတ်ဘဲဒီမိန်းကလေးဗီဒီယိုထဲမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလုပ်ချင်ရင်၊ သူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ချင်ရင် Yale ပျောက်ဆုံးသွားပြီဆိုတာငါတို့သိလိမ့်မယ်။ ငါစိန်ခေါ်ခံရဖို့ချင်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုမဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးစေချင်တယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
သငျသညျယေးလ်ဘတ်စကက်ဘောကပ္ပတိန်, Jack Montague ၏အမှုအောက်ပါခဲ့သလား
ငါကောင်လေးကိုခံစားရတယ်ဆိုလိုပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတစ်နိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေ။ ဒါဟာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အဆိုပါတိုးတက်သောလက်ဝဲယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟန်ဆောင်၏ flimsiest အပေါ်ဖျက်ဆီးနိုင်ရှိရာကောလိပ်ကျောင်းအတွက်လိင်အကြားပါဝါအတွက်မညီမမျှဖြစ်စေဖန်တီးထားသည်။ ဒီလူဟာငါကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှားယွင်းတဲ့အချိန်မှာမှားယွင်းတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီးစွပ်စွဲချက်မှားယွင်းနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံဥပမာပဲ။ သူသည်အသင်းတွင်နေရာမရခဲ့သည့်အတွက်နှင်ထုတ်ခံရပြီးကျန်အပိုင်းများမှာအရူးကောလိပ်များမည်မျှရှိသည်ကိုပြသည်။
ထိုရုပ်ရှင်သည် James Deen နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သူကသူ့ရည်းစားဟောင်းဟောင်းတ ဦး၊ တရားဝင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်စိတ်မချရဆုံးသက်သေဖြစ်သူအားမုဒိမ်းမှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရသည်။ လူတွေကအဲဒီစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပဲသူနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ, ငါတို့စွပ်စွဲချက်ကျော်ကလူရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့သွားလျှင်, ငါတို့လျောက်ပတ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်ထဲကထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမယုံကြည်တော့ပါ။ လူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စွပ်စွဲချက်များ၊ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကြားနာခြင်းနှင့်စွပ်စွဲချက်များဖြင့်အခြေခံမပါသော pandemonium ကိုသာရိုးရှင်းစွာယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကစိတ်ပျက်ဖွယ်အခြေအနေပါပဲ။
မိဘများသည် ၄ ​​င်းတို့ပြေးနေသောကောလိပ်များသို့သူတို့၏ကလေးများကိုပို့ရန်မသွားပါ။ ကျောင်းသားဟောင်းများလည်းသူတို့ကိုလှူဒါန်းမည်မဟုတ်ပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမလုပ်သောအရာတစ်ခုမှာကျောင်းသားများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်အိတ်ကပ်စာအုပ်များ၏ပိတ်သံကိုနားထောင်ကြသည်။ ဒီနှစ်မစ်ဆူရီမှာဒီနှစ်မျှော်လင့်ထားသည့် application အရေအတွက်နည်းသွားပြီးကျောင်းသားဟောင်းများလည်းလှူဒါန်းခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ကြပြီး Melissa Click ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများနားထောင်မည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ငွေဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကောလိပ်တွေကပိုက်ဆံအမြောက်အများကိုဆုံးရှုံးတော့မယ်။
သင်လိင်တူချစ်သူပါပဲ, ဒါပေမယ့်သင်ကလိင်တူချစ်သူအဖြစ်အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုမျှမဖွင့်ကဆိုပါတယ်ပါတယ်။ သင်လိင်တူချစ်သူအစစ်အမှန်မဟုတ်ယုံကြည်သည်အဘယ်ကြောင့်အပေါ်ချဲ့ထွင်နိုင်သလား?
yeah, ငါပဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ကွဲပြားခြားနားသည်ထင်။ ဒါဟာလိင်တူဆက်ဆံခြင်း Sparta ကတည်းကနှင့်မတိုင်မီကတည်ရှိကြောင်းရှင်းပါတယ်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံခြင်းသည်စတုတ္ထလှိုင်းအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲမှမောင်းနှင်သည့်ခေတ်မီဖက်ရှင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံကြရသည်ကိုငါတို့သိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအကြားတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲကကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့လိင်အကြားကွာဟချက်ဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုများလာစေမယ်လို့ယူဆတာဟာမဆင်ခြင်နိုင်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ, ငါ့စာအုပ်ထဲတွင်, လိင်တူချစ်သူဖန်တီးမယ့်အရာပါပဲ။ ငါမိန်းမတွေကိုကြိုက်တယ်၊ ငါသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာလိင်တူချစ်သူတွေမဟုတ်ကြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လိင်တူချစ်သူတွေဟာအ ၀ လွန်သူတွေဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုမှာပါ ၀ င်နိုင်ပြီးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။ မြေတပြင်လုံးအပေါ်လိင်တူချစ်သူအလွန်ပျော်ရွှင်မထင်ထားဘူး။ သူတို့ဟာပျော်ရွှင်မှုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံကြဘူး။ ပြီးတော့လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိထားတာကသူတို့ဟာ ၀ မ်းနည်းစရာ၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရလာတာကိုပြောတာပါ၊ ငါကမိန်းမတွေကိုကယ်တင်တာ၊ ယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့အားပေးတာပေါ့။
လုံးဝအို။ ငါမမှန်မကန်ရောဂါရွေးချယ်ခဲ့သည် အမျိုးသမီးရေးဝါဒသည်အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ပို၍ တူသည်ဟုငါပြောသင့်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကရှုပ်ထွေးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာရောဂါနဲ့အတူသွားခဲ့ကြတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာကငါမဲရုံတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်၊ လူ ၂၂၀၀၀ မဲပေးကြတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်မှာသင့်ကလေးသည် (က) အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) (ခ) ကင်ဆာရောဂါရှိပါ့မလား။ ကင်ဆာရောဂါသည် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
လူတွေကိုငါ့ဆီလာပြီးနှစ်ကြိမ်ကင်ဆာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူလို့ပြောခဲ့တယ်၊ ငါကကင်ဆာကိုရွေးခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လူတို့အားဤမျှနှင့်မည်မျှပျော်စရာရှိသည်ကိုအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြရုံသာမကကမ္ဘာပေါ်ရှိဟာသဉာဏ်အရှိဆုံး၊ စိတ်အားထက်သန်စွာနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလူများကိုလည်း ၀ မ်းသာစေနိုင်သည်။ ပါးပြင်ကိုအနီရောင်နှင့်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီအချို့၏မိုက်မဲသောအင်တာနက်ကိုမိုက်မဲသောအင်တာနက်အရာဖြင့်ထွန်။ ထိုးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်ကျောင်းဝင်းပေါ်၌တက်လာသောအခါဘာဖြစ်လာမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျွန်ပြုမှုကိုထောက်ခံအားပေးသူဂျွန်စီ။ ကာဟွန် (John C. Calhoun) ၏အမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ထားသောကောလိပ်များအကြောင်း Yale ၌အငြင်းပွားဖွယ်ရာများအကြောင်းသင်ကြားဖူးပါသလား။
ဟင့်အင်း၊ သဘာဝရှေးရိုးစွဲအနေနှင့်ငါသမိုင်းပြန်လည်ရေးရန်မယုံသော်လည်းအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏သာလွန်မှုကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး shit ထုတ်လုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကဘာတွေဖန်တီးခဲ့တာလဲ။ သမိုင်းကိုပြန်ရေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘယ်ကလာသည်ကိုမေ့နေသည် Orwellian နှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ။ ဒါဟာလစ်ဘရယ်လုပ်ပေးအတိအကျယျ။ လစ်ဘရယ်များကမည်သည့်သမိုင်းကိုမှမသိပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစာတမ်းရေးရန်နှင့်၎င်းကိုရေးရန်သင့်တော်သည်။ ထို့နောက်သူတို့သင်ယူရန်မလိုသောကြောင့်ဘာမှမလေ့လာလိုကြပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြိနျ၏ဖက်ရှင်တွေနှင့်ကိုက်ညီမထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်သမိုင်း၏ဤ asinine ပြန်ရေးမိုက်မဲသည်။ ဒါဟာမိုက်မဲပါတယ်
ဘရပ်ဆဲလ်စ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင်သင်ဘာကြောင့်အံ့အားသင့်မိကြတာလဲ၊ ဒါသူတို့လုပ်ပေးပါတယ်။ သို့ဖြစ်ရာအစ္စလာမ်သည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသောဘာသာဖြစ်ပြီးမွတ်စလင်မ်အားလုံးကိုအကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အတူတကွမစုစည်းသင့်ကြောင်း၊
အစ္စလာမ်သည်သမိုင်းတွင်ငြိမ်းချမ်းသောဘာသာတရားတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်ဘာသာတရားအများစုကဲ့သို့အတက်အဆင်းများခဲ့သော်လည်းမည်သည့်အခါကမျှငြိမ်းချမ်းစွာမနေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဘာသာတရားများအနက်အစ္စလာမ်သည်ထူးခြားသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာတရားကရယ်စရာဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကငါသေချာပါတယ်တစ်ဖြောင့်မျက်နှာနှင့်ကမပြောနိုင်ပါ။ ငါဂုဏ်ထူးအများကြီးလုပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဒါဟာလိင်တူချစ်သူကလူတွေကိုခေါင်မိုးပေါ်ကနေလွှင့်ပစ်ချင်တဲ့ ISIS ပဲမဟုတ်ဘူး။ ဒါကအဓိကမွတ်စလင်လူ့အဖွဲ့အစည်းပဲ။ ဤကြွယ်ဝသောယေးလ်ကျောင်းသားများမှလာသည့်နိုင်ငံအများစုသည်ထိုသို့အတိအကျပြုကြသည်။ ငါကလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်အသတ်ခံနိုင် 10 သို့မဟုတ် 11 မွတ်စလင်နိုင်ငံများရှိရဲ့။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာဆော်ဒီဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေသောငါလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောနိုင်ငံများ, မွတ်စ်လင်ယဉ်ကျေးမှုတွင်အမျိုးသမီးများ၏ဖိနှိပ်မှုကျယ်ပြန့်သည်။ ဒါဟာအကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ဘူး၊ ISIS မဟုတ်ဘူး၊ အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုပင်။ ငါမကြိုက်ဘူး။ ငါသူတို့မိန်းမတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသူတို့လိင်တူချစ်သူစဉ်းစားကြိုက်နှစ်သက်ကြဘူး။
သငျသညျ Trump '' ဖေဖေ '' ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း
ဒါကြောင့်လစ်ဘရယ်တက်အဆုံးသတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ဒါဟာ creepy ထင်, ဒါပေမယ့်ငါကချိုမြိန်ထင်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာတစ်ယောက်ယောက်ကိုဖေဖေဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာမင်းက Daddy လို့ခေါ်တဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာရင် meme တစ်မျိုးရှိတယ်။ ဒါနဲ့တကယ့်ကမ္ဘာထဲကိုတိုးချဲ့လိုက်ပြီး Trump ကို 'Daddy' လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ ငါကလစ်ဘရယ်တက်အနာဘယ်လောက်မြင်သည်အထိငါအထူးသဖြင့်ကတွဲမခံခဲ့ရပါဘူး။ ယခုမှာငါသည်ခပ်သိမ်းသောအချိန်ကလုပ်ပါ။
ငါ Ben Carson ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကလူတစ်ယောက်ကို Ambien မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးရုံးကိုမရွေးရဘူး။
ဤအင်တာဗျူးသည် The Tab Yale ၏ယုံကြည်မှုများကိုမဖော်ပြပါ။ သငျသညျဒီကိစ္စကိုအကြောင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရလျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ ။